FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY KARAZANA FOX TERRIER DOG TOY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny karazana Fox Terrier Dog Toy
UKC CH Tuffy, sary natolotry ny Rocktalk Toyhio Terriers
Lisitry ny Dog Fox Terrier Mix Dogs
kilalao fahks TAIR-ee fiambenana
Ny Toy Fox Terrier dia fantatra amin'ny anarana hoe American Toy Terrier na Amertoy. Mainty ny orona afa-tsy amin'ny alika sôkôla izay ho miloko irery. Maizina sy boribory ny maso. Ny sofina dia miendrika V ary mahitsy. Ny fijanonana voafaritra dia manasaraka ny karan-doha amin'ny domba amin'ny volo kely sy tery. Fohy sy matevina ny volo. Voafatotra fohy ny rambony ary avo avo. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny rambon'ny dock amin'ny ankamaroan'ny faritra Eropa. Ny palitao dia tricolor, fotsy be indrindra misy marika mainty sy mainty na mena. Misy loko hafa, saingy mety tsy eken'ny fenitra an-tsoratra.
Ny Toy Fox Terrier dia mety ho kely ara-batana, saingy ity dia terrain kely matanjaka ary mitazona ny fitiavany rehetra Fox Terrier razana. Ny karazany dia henjana sy mamiratra, ary mety ho maditra tsy misy fitarihana mety avy amin'ny tompony. Liana sy mavitrika i Toy Fox Terrier mitazona ny fanahiny tanora mandritra ny androm-piainany. Izy io dia manan-tsaina, be fitiavana, mora tohina ary mahafinaritra. Mailo be izy io, tia karokaroka ary mailaka. Alika mpiara-miasa ity izay tsy nanadino ireo fomban-tany taloha, ary noho izany dia hiady amin'ny totozy sy biby kely. Alika kely atletika ity dia tia fihazana. Tia sy tena mahatoky ity karazany ity dia alika manan-tsaina sy mahay mampiofana. Ny sasany nampiofanina hanampy olona sembana manodidina ny trano. Voaporofo fa alika mandre tena tsara ho an'ny marenina izy io. Azo ampiofanina izy io mba hitondra ny mpiara-belona aminy ho any amin'ny loharanon'ny feo, toy ny telefaona. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona olan'ny fitondran-tena . Tadidio foana, alika dia alika canines fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby. Raha mijanona ho mpitondra 100% ny zanak'olombelona, ​​dia tsy ho mpiambina ny alika. Ny ankizy dia tokony ampianarina hitondra ny alika amin-katsaram-panahy, kanefa amin'ny fomba toy izany no ahitan'ny alika ilay zaza ho mpitarika azy. Ity alika falifaly ity dia azo antoka fa hitondra tsiky amin'ny endrik'ireo rehetra mifanena aminy, noho ny fomba feno hafanam-po sy toy ny alikakely.
Haavony: manodidina ny 10 santimetatra (25 cm)
Lanja: 3,5 - 7 pounds (1,5 - 3 kg)
Ity dia karazana iray mahasalama ihany, na izany aza, ny sasany dia mora voan'ny Legg-Calvé-Perthes sy stifle, izay olan'ny kilalao mahazatra. Ny alika sasany dia tsy mahazaka pulp amin'ny bitika (mahazatra izany matetika). Ary koa, katsaka sy varimbazaha.
Ny Toy Fox Terrier dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika be izy io ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany. Tsy mahazaka ny toetrandro mangatsiaka izy io. Tokony hitafy palitao amin'ny ririnina izy io mba hanampiana azy hanafana.
Alika kely mavitrika ireto izay mila a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazana rehetra, dia tsy hanatanteraka ny fironany voalohany handeha izany. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda.
13-14 taona eo ho eo
Alika kely 2-6 eo ho eo
Ny Toy Fox Terrier dia mora taovolony. Indraindray kosohy sy kosohy ny palitao malama. Ataovy fohy ny hoho. Ity karazana ity dia mpamafa hazavana.
Ny Toy Fox Terrier dia novolavolaina tany Etazonia tamin'ny taona 1930. Avy mivantana amin'ny Fox Terrier malefaka , izay niampita amina karazana kilalao isan-karazany toy ny th Pinscher kely , Greyhound italianina , Chihuahua SY Manchester Terrier , miaraka amin'ny fikasana hamerina azy kely. Ny fampiasana voalohany dia ny fihazana voalavo. Ilay Toy Fox Terrier dia neken'ny AKC tamin'ny 2003.
NTFTA = Fikambanam-pirenena Fox Terrier Association
Toy Fox Terrier Puppies - Sary natolotry ny Foxhill Toy Fox Terriers
Foxlairs Minnie the Moocher, sary natolotry ny Foxlair Toy Fox Terriers
Sary natolotry ny Foxlore Toy Fox Terriers, sary nalain'i Sally Richardson
Sadie the Toy Fox Terrier alika kely amin'ny 3 volana.
Oreo the Toy Fox Terrier amin'ny 4 taona— 'Tena mahafinaritra tokoa izy. Ny fitiavany ahy tsy misy fepetra, ary tena ilaina. Izy dia tsara miaraka amin'ny ankizy, biby ary mandeha. Tsy fahita firy ny fanamarihany, ka nieritreritra aho fa ho fanampiny tsara ho an'ny sarin'ity karazany ity. '
Hijery ohatra misimisy momba ny Toy Fox Terrier
Toy Fox Terrier sary 1
Toy Fox Terrier sary 2
staffordshire bull terrier vs pitbull terrier
greyhound italiana volondavenona sy fotsy
amerikana bulldog afangaro amin'ny alika kely pitbull
mifangaro volo terrier mifangaro volo
fangaro amin'ny fary sy fangaro amin'ny lavaka